တရုတ်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ် ဒီဇိုင်းပုံစံ အကဲဖြတ်နောက်ဆုံးအဆင့် ပြိုင်ပွဲကို ဖုရှင်းမြို့၌ စတင်ကျင်းပ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း လျောင်နင်ပြည်နယ် ဖုရှင်းမြို့၌ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော တရုတ်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ် ဒီဇိုင်းပုံစံ အကဲဖြတ်နောက်ဆုံးအဆင့် ပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ရဟတ်ယာဉ်ပုံစံငယ်တစ်စင်း သရုပ်ပြပျံသန်းနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း လျောင်နင်ပြည်နယ် ဖုရှင်းမြို့၌ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော တရုတ်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ ဒီဇိုင်းပုံစံ အကဲဖြတ်နောက်ဆုံးအဆင့် ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြိုင်ပွဲဝင်များက လေယာဉ်ပုံစံငယ်များအား ပြင်ဆင်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း လျောင်နင်ပြည်နယ် ဖုရှင်းမြို့၌ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော တရုတ်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ် ဒီဇိုင်းပုံစံ အကဲဖြတ်နောက်ဆုံးအဆင့် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် သရုပ်ပြအသင်းများက စုပေါင်းမှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း လျောင်နင်ပြည်နယ် ဖုရှင်းမြို့၌ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော တရုတ်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ် ဒီဇိုင်းပုံစံ အကဲဖြတ်နောက်ဆုံးအဆင့် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ရဟတ်ယာဉ်ပုံစံငယ်တစ်စင်း သရုပ်ပြပျံသန်းနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
၂၀၂၁ ခုနှစ် တရုတ်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ် ဒီဇိုင်းပုံစံ အကဲဖြတ်နောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲကို တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း လျောင်နင်ပြည်နယ် ဖုရှင်းမြို့၌ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ တက္ကသိုလ် ၇၀ ခန့်မှ ပြိုင်ပွဲဝင် ၁,၇၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
China International Aircraft Design Challenge final kicks off in Fuxin
SHENYANG, Oct. 13, 2021 (Xinhua) — The final of 2021 China International Aircraft Design Challenge kicked off here on Wednesday. More than 1700 competitors from about 70 universities attended the final.
Photo 1 – Teams participate in the opening ceremony of the China International Aircraft Design Challenge final in Fuxin, northeast China’s Liaoning Province, Oct. 13, 2021. (Xinhua/Yang Qing)
Photo2– A helicopter model performs during the opening ceremony of the China International Aircraft Design Challenge final in Fuxin, northeast China’s Liaoning Province, Oct. 13, 2021. (Xinhua/Yang Qing)
Photo3– Competitors prepare their aircraft model during the final of the China International Aircraft Design Challenge in Fuxin, northeast China’s Liaoning Province, Oct. 13, 2021. (Xinhua/Yang Qing)
Photo4– Performing teams pose foragroup photo during the opening ceremony of the China International Aircraft Design Challenge final in Fuxin, northeast China’s Liaoning Province, Oct. 13, 2021. (Xinhua/Yang Qing)
Photo5– A helicopter model performs during the opening ceremony of the China International Aircraft Design Challenge final in Fuxin, northeast China’s Liaoning Province, Oct. 13, 2021. (Xinhua/Yang Qing)■